Kandụl ndị na -esi ísì ụtọ - nka dị mfe na ịchọ mma | Crafts On
Alicia tomero | | Crafts, Ọrụ ụlọ, Nzughari
Chọpụta otu ị ga -esi mee ụfọdụ kandụl dị nnọọ mfe iji chọọ mma ma gbanye n'ụlọ gị. Ma ọ bụ ọ bụrụ na -amasị gị, enwere ike ịme ha wee nye ha onyinye. Ị ga -ahọrọ dị ka isi mgwa ihe mmanụ ma ọ bụ paraffin, Ma ọ bụ zụta ya ma ọ bụ jigharị ya na kandụl. N'ọnọdụ m, ejila m ya ọzọ ma gbazee ya ka m nwee ike jupụta ya n'ụdị ụfọdụ m họọrọ. Enwere ike iji ha ite ite o obere ite iko inwe ike inye ha uru nke abụọ. Iji mara ka esi eme ya, ị nwere ike ilele vidiyo ngosi anyị ma ọ bụ hụ ka esi eme ya site na nzọ dị n'okpuru.
1 Ihe m ji maka kandụl:
Ihe m ji maka kandụl:
2 nnukwu wax ma ọ bụ kandụl paraffin
Mmanụ a na-etinye na pawuda (enwere ike iji ihe ọ bụla ọzọ)
Otu obere ite iko
Eji achọ mma nke agba abụọ (n'ọnọdụ m uhie na ọcha)
A ike nke na -echekwa
Anyị na -ahọrọ kandụl wee gaa na -agbaji n'ime obere iberibe na -atụba wax ma ọ bụ paraffin na nnukwu efere. Anyị ga -akwanyere wick ahụ ka anyị nwee ike megharịa ya ma emechaa. Ebumnuche ya bụ ịtọpụ wax ma ọ bụ paraffin ahụ maka nke a anyị ga -eme ya na mmiri ịsa ahụ ma ọ bụ na ngwa ndakwa nri. Ọ bụrụ na anyị na -eme ya na ngwa ndakwa nri, anyị ga -ahazi ya obere ike na nkeji nkeji 2 were ngaji na -agagharị. Anyị ga -achọ oge niile ọ na -ewe ruo mgbe anyị ga -ahụ na ihe niile agbazela kpamkpam. Mgbe anyị na -agbaze ya, anyị ga -etinye tablespoons abụọ ma ọ bụ atọ nke ihe kacha mkpa ma ọ bụ mmanụ na -esi ísì ụtọ. N'okwu m ka m jiri kachasi mkpa cinnamon. Anyị na -emekọ ọnụ na wax ka mmanụ wee banye nke ọma.
Anyị na -ewere ite iko ahụ iji chọọ ya mma. Anyị ga -afụchi otu ji achọ eri n'elu na -enye ya ọtụtụ ntụgharị. Anyị na -akụ okpukpu abụọ n'ihu na anyị na -eme ụta mara mma.
Anyị na -ewere ite canning wee jiri ya chọọ ya mma eriri jute. N'akụkụ ala nke ụgbọ mmiri anyị ga -aga ịkpa ụdọ ma anyị ga -ejikọ ya nke nta silicone na-ekpo ọkụ. Anyị ga -enye ya laps ise ma ọ bụ isii ma ọ bụ ruo mgbe anyị hụrụ na ọ na -achọ mma karịa ma ọ bụ obere.
Ọkwá ọzọ m jiri bụ a na -emegharị ma na -achọrịrị mma nke m mere na nka ọzọ, ka ịhụ ka esi eme ya ị nwere ike pịa njikọ a. A ga -ejizi ogho oriọna anyị hapụworo mee ihe n'ime ite. Anyị ga -ejikọ ntọala nke wick n'ime karama ọ bụla nwere mpekere silicone, anyị ga -etinye ya n'etiti. Anyị ga -ebipụ iberibe wick.
Site na wax gbazere ma ọ bụ paraffin anyị nwere ike wụsa ya n'ime karama ọ bụla. Anyị ji aka anyị jide oriọna ahụ ka ọ ghara ịgagharị mgbe anyị na -aga ịwụsa waksị. Ugbu a, ị ga -eche nkeji ole na ole maka ya ka ọ gbasie ike ma kwadoo kandụl anyị mara mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Kandụl ndị na-esi isi
Nka 5 maka ịlaghachi ụlọ akwụkwọ, akụkụ 2
Ihe mkpuchi nkpuchi maka nkpuchi